Uhambo oluya eziqhingini zaseCayman | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Izindawo zokuvakasha, Iziqhingi
Umhlaba uneziqhingi eziningi ezinhle futhi Ulwandle lwaseCaribbean igxila enanini elihle lamapharadesi. Ngokwesibonelo, Iziqhingi zaseCayman, indawo yaseBrithani ephakathi kweJamaica neNhlonhlo Yucatan, eyaziwa ngokuba yi-a indawo yentela lapho izinkampani nabosozigidi bevika intela.
Kepha iziqhingi zaseCayman zinezabo ingcebo yezivakashi, ngakho-ke namuhla sizokwazi ukuthi bayini, izindawo zabo, amasiko abo ...
1 Iziqhingi zaseCayman
2 Ukuvakasha KweCayman Islands
Iziqhingi zintathu sezizonke futhi zisentshonalanga yoLwandle lweCaribbean, eningizimu yeCuba nasenyakatho-mpumalanga yeHonduras. Imayelana ne- IGrand Cayman Island, iCayman Brac neLittle Cayman. Inhlokodolobha idolobha laseGeorge Town, eGrand Cayman.
Lezi ziqhingi kukholakala ukuthi zatholwa nguChristopher Columbus ngo-1503 ohambweni lwakhe lokugcina. UColumbus ubabhabhadisele eLas Tortugas, ngenani elikhulu lalezi zilwane, yize bekukhona nama-alligator futhi kuthiwa, lapha, igama abanalo namuhla. Abavubukuli abatholanga izinsalela ezazihlala abantu ngaphambi kokuhlala kwe-Europe, kepha akunakuphikwa.
Ngaleso sikhathi iziqhingi zazikhona Izindawo zabaphangi, abathengisi kanye nabaqhamukayo ebuthweni likaCromwel, ngaleso sikhathi eyayibusa iNgilandi. INgilandi yasala neziqhingi, kanye neJamaica, ngemuva kokusayinwa kweSivumelwano SaseMadrid ngo-1670. Yize ngaleso sikhathi kwakuyipharadesi labaphangi. Kamuva, ukuhweba ngezigqila kwashintsha ukudaleka kweziqhingi lapho kulethwa izinkulungwane ezivela e-Afrika.
Isikhathi eside iziqhingi zaseCayman zazingaphansi kokuqeqeshwa kweJamaica, kwaze kwaba ngo-1962 lapho iJamaica yazimela. Eminyakeni ethile ngaphambi kokuba kwakhiwe isikhumulo sezindiza eziqhingini zomhlaba, ngakho lokho kwakukhanga ezokuvakasha. Kwabe sekufika amabhange, amahhotela kanye nechweba lokuvakasha. Ngokomlando iziQhingi zaseCayman bekuyindawo engenamsebenzi. Kukhona indaba engelona iqiniso ekhuluma ngokuphahlazeka komkhumbi abasindiswa yiziqhingi. Le nganekwane ithi ekuhlengeleni balondoloze ilungu lomqhele wamaNgisi yingakho inkosi ithembise ukungalokothi ithele ...
Lezi ziqhingi ziyiziqongo zezintaba ezingaphansi kwamanzi, iCayman Range noma iCayman Rise. Cishe bangamakhilomitha angama-700 ukusuka eMiami kanti bangama-366 kuphela abavela eCuba. IGrand Cayman Island inkulu kunabo bobathathu. Lezi ziqhingi zakhiwa ngamakhorali amboza iziqongo zezintaba ezivela e-Ice Age, izinsalela zeSierra Maestra eCuba. Isimo sezulu sakhona simanzi futhi somile.
Kunenkathi yemvula kusuka ngoMeyi kuya ku-Okthoba nenkathi engenamvula kusuka ngoNovemba kuya ku-Ephreli. Azikho izinguquko ezinkulu ekushiseni, kodwa iziphepho eziyingozi yilezo ezinqamula i-Atlantic kusukela ngoJuni kuya kuNovemba.
Ukuvakasha KweCayman Islands
Ake siqale ngesiqhingi Grand Cayman. Amahle I-Seven Mile Beachs ikuTop 3 yezindawo ngoba igxila emahhotela nasezindaweni zokungcebeleka eziningi. Lokhu kungenye ulwandle lwamakhorali ogwini olusentshonalanga yesiqhingi, muhle. Ngulwandle lomphakathi olungahlolwa ngezinyawo nokuthi yize igama lalo lingamakhilomitha ayi-10 ubude. Enye indawo engasogwini INorth Sound, ikhaya lama-stingray.
IGeorge Town Idolobha elithakazelisayo elinobuciko bendabuko, izitolo ezingenamsebenzi, izinhlobo ezikhethekile zezitolo ezicebile kakhulu kepha nezitolo ezenziwe ngezandla nemikhiqizo yendawo. Ukweqa lesi siqhingi uye empumalanga ungavakashela i- INdlovukazi u-Elizabeth II Botanical Park noma i Ama-Blue Iguanas. Ukwazi umlando wendawo kukhona UMnyuziyamu Kazwelonke Weziqhingi zaseCayman, I-Rum Point namathuba ayo okuntywila kanye nezihlahla zayo ze-casuarina, i- UPedro St Jame Castles, isakhiwo esidala kunazo zonke eziqhingini, noma Idolobha iBodden, idolobha lokuqala lesiqhingi.
I-Cayman Brac iyindawo engcono kakhulu uma uthanda imvelo hhayi izitolo ezingenantela. Lesi siqhingi sinemihume yamatshe okufanele siyazi, kukhona ama-sinkholes okufanele akwenze snorkeling nokudilika, Noma kunomkhumbi ocwile, kukhona amahlathi aluhlaza esiqhingini, ikhaya elihle lezinyoni ezingajwayelekile, eligcwele izindlela zokujabulela ukuhamba izintaba ... Lapha ungafika lapho ngendiza, engxenyeni yehora, usuka eGrand Cayman.
Ngokwengxenye yayo ILittle Cayman iyisiqhingi esikude, engamakhilomitha ayi-16 kuphela ubude nekhilomitha nohhafu ububanzi. Kuyindawo enhle enokuthula, nge amabhishi angenamuntus, izihlahla zesundu ezihamba nomoya, amanzi acwebile ... Ungaqasha ibhayisikili noma isithuthuthu ukuze usihlole, ubhukude emanzini afudumele e- ISouth Hole Sound Lagoon, vakashela esiqiwini I-Natural Booby Pond, ngezinkulungwane zezinyoni, uhambahamba phakathi kwemifula noma ubhukuda e IBloody Bay Wall Marine Park.
Lapha kukhona eyodwa Ukwehla kwamamitha ayi-1500 ngakho-ke uzibuthe wabatshuzi, kanye ne Impilo yasolwandle okuhle okucasha ekujuleni lapho kungashodi khona imisebe, oshaka kanye nezimfudu. Ungase futhi ube nesibindi sokugwedla kancane ku-kayak bese ufinyelela ifayela le- Isiqhingi sase-Owen, okuthile okufana neCayman Island engaziwa.
Singakuhlela kanjani ukuvakasha eziqhingini zaseCayman? Izinsuku eziyi-10 zingaba isiqalo esihle uma ufuna ukuchitha isikhathi eGrand Cayman bese uzama izinsuku ezimbili noma ezintathu kwesinye isiqhingi. Okokuya e- Inyanga yezinyosiMuhle njengoba kukhona ukugibela amahhashi olwandle, ukudla kwangasese nezikhathi ze-spa kuwo wonke amahhotela. Ekhuluma nge amahhotela, ungakhetha inketho konke - okubandakanya kanti abanye banezinhlelo zokudla neziphuzo ozikhokhela ngokwehlukana.
Ukuvakashela iziqhingi zaseCayman Akudingekile ukucubungula i-visa. Uma niyizakhamizi zaseMexico, eBrazil noma e-Argentina, akunjalo. Y ayikho imigomo edingekayo, okwamanje. Sizobona kamuva ukuthi kwenzekani nge-Covid. Kuyiqiniso ukuthi iningi lezokuvakasha livela e-United States kodwa futhi ungafika ngendiza usuka eCuba naseHonduras. Uma useziqhingini ungasebenzisa izithuthi zomphakathi, amabhasi, amatekisi, ukuqasha izimoto ... Ukuze weqe phakathi kweziqhingi yebo noma yebo kufanele uhambe ngendiza, iCayman Airways Express.
Vele, khumbula ukuthi lapha ushayela kulayini wesobunxele, isiNgisi esihle. Iyini imali yeziQhingi zeCayman? I- Idola laseCaymanian, noma amukelwa amadola aseMelika. Izinga lokushintshisana ngedola elilodwa laseMelika 1 CI $ cents. Siyethemba ukuthi lolu lwazi lukusiza ucabange ngeziQhingi zaseCayman njengendawo ongaya kuyo ngamaholide.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindawo zokuvakasha » Uhambo oluya eziqhingini zaseCayman